मधेशका नेता डा. सिके राउतको जीवनमाथि फिल्म बन्ने, को होला हिरो ?
मधेशका नेता डाक्टर सिके राउतको जीवनीमा आधारीत भएर नेपाली फिल्म बन्ने पक्का भएको छ । बुधबार कार्यक्रम आयोजना गरी ’डाक्टर सिके राउत’ नाम रहने यस फिल्मको बारेमा जानकारी दिदै फिल्मको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । उक्त फिल्मको घोषणा कार्यक्रममा डा. सिके राउत पनि उपस्थित भएका थिए । यस फिल्ममा उनको भूमिका भोजपुरी फिल्मका हिरो परदेशी शाहले निभाउने भएका छन् ।
निर्माण टिमले कार्यक्रममा फिल्मको औपचारिक निर्माण घोषणासँगै फिल्मको टीजर पनि सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली, भोजपुरी तथा हिन्दी भाषामा निर्माण हुने लागेको यस फिल्मको छायांकन विरगञ्ज, जनकपुर तथा काठमाडौं लगायतका स्थानमा हुने फिल्मका निर्माता बाबुले जानकारी दिएका छन् । फिल्मलाई धेरै जसो भोजपुरी फिल्म निर्देशन गरेका निर्देशक सन्तोष शाहले फिल्मको निर्देशन गर्ने भएका छन् ।
फिल्मको कथा पनि उनी आफैले तयार पारेका हुन् । फिल्म ‘डा. सिके राउत’ मा अभिनेता परदेशीका साथ पुकार भट्टराई, ध्रुव कोइराला, विशाल पहारी, किरण थापा, राजिव कर्णलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहने पक्का भएको छ । फिल्मको लागि मुख्य अभिनेत्रीको भने अझै सम्म टुंगो लागेको छैन । भदौबाट छायांकन सुरु हुने यस फिल्मलाई आउदो छठ पर्वमा अवसरमा रिलिज गर्ने निर्माण टिमको तयारी रहेको छ ।
माँ राधिका इन्टरनेशनल मुभिजको प्रस्तुति रहने फिल्मलाई पवन गौतमले छायांकन गर्ने भएका छन् भने फिल्ममा रेवन्त विक्रम थापाको द्वन्द निर्देशन रहने भएको छ । मधेश आन्दोलनमा आफूले गरेको संघर्षको कथामा फिल्म बनेको र फिल्मलाई कमर्शियल बनाउनका लागि सिके राउतले आफ्नो जीवनको ५० प्रतिशत र बाँकी सबै काल्पनिक कथा जोडिएको बताएका छन् ।